Ada nkwụnye na Parts Factory - China nkwụnye na Parts Manufacturers, Suppliers
KLL-nkwụnye na Parts-301D
Nkọwa ngwaahịa nkọwa mba. KLL-301D ibu （g） 44 ngwaahịa ihe ọla kọpa + zinc alloy + plastic size （MM） 40 × 27 nkwakọ 1 pc / ploybag 240pcs / ctn MOQ 1000 PCS ahaziri OEM & ODM Lead oge 15-35days Short Description Gas nkwụnye, na-ejide gas katrij kwụ ọtọ, jikọọ adpater n'ime katrij ahụ, tinye ọwa ọkụ n'ime ihe nkwụnye ọkụ. N'ihu ngwaahịa ihu igwe nke ihu igwe - gbanye isi nwayọ nwayọ na ụzọ ziri ezi ịmalite ...
KLL-nkwụnye na Parts-302D
Nkọwa ngwaahịa nkọwa mba. KLL-302D ibu （g） 46 ngwaahịa ihe ọla + alimunum + plastic size （MM） ）40 × 29 nkwakọ 1 pc / ploybag 240pcs / ctn MOQ 1000 PC ahaziri OEM & ODM ebute oge 15-35days N'ihu azụ Product Image ofzọ nke ọrụ Nghọta -Turn akpu nwayọ nwayọ n'ụzọ dị mma iji bido ikuku na-asọpụta wee pịa trridge ruo mgbe ọ pịa. -Tughari ugboro otu ada ada ìhè Jiri-ngwa oru ugbu a dị njikere maka ojiji.Gbanwee FL ...
KLL-nkwụnye na Parts-305D
Oke nlereanya dịghị. KLL-305D ibu （g） 33 ngwaahịa ihe ọla + zinc alloy + plastic size （MM） 107x50x27 nkwakọ 1 pc / ploybag 300pcs / ctn MOQ 1000 PCS ahaziri OEM & ODM Lead oge 15-35days Short Description SS defelacotr, eji maka ọkpọkọ ịgbado ọkụ Usoro nke ọrụ 1.Otu esi rụọ ọrụ: (1) Biko lelee mgbazigharị whell tupu ịwụnye, Gbaa mbọ hụ na wiil na-agbanwe agbanwe na (-) ntụziaka nke ntụgharị iji gbochie ikuku gas mgbe ịwụnyechara. (2) ...